#LAND - Google Earth Course - site na ncha - Geofumadas
#LAND - Google Earth Course - site na ọkọ
Bụrụ ezigbo ọkachamara Google Earth Pro ma were eziokwu ahụ dị ugbu a free.
Maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị ọkachamara, ndị nkuzi, agụmakwụkwọ, ụmụ akwụkwọ, wdg. Onye ọ bụla nwere ike iji ngwanrọ a wee jiri ya na mpaghara ya.
Google Earth bụ sọftụwia na-enye ohere ikiri site na nlele satịlaiti, kamakwa 'ntụgharị n'okporo ụzọ', Planetwa anyị Earthwa. Ugbu a mbipute kwa kpamkpam free ma na-enye ohere ịnweta atụmatụ niile dị elu.
Ma ị bụ akpan akpan na ịchọrọ naanị 'ịga' ụwa niile, dịka a ga - asị na ị bụ profesional na ị ga-eji tinye ozi ma mepụta maapụ, mmụta a ga-aba uru.
Ihe omume a bu ihe nlere anya di egwu ụwa agụmakwụkwọ, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ijikọ isiokwu ahụ na ihe omume ndị metụtara Google Earth (dịka ọmụmaatụ, lee usoro ala, na-arụ ala, akụkọ ihe mere eme, wdg…)
Haziri akwụkwọ ahụ Ngalaba 4:
Okwu Mmalite: Ha ga - amu icho ebe, tinye ndi n’oru ma hazie ngalaba di iche-iche nke Google Earth Pro.
Tinye ozi: Will ga - amụta ịtinye akara akara, akara na polygons. Na-eburu ozi n'ụdị dị iche iche na ibubata data site na GPS.
Ozi mbupụ: Will ga - amụta ịhazi akwa gị ma mepụta faịlụ kmz. Ga-ebupụ ihe onyonyo ma mepụta njegharị.
Nhọrọ dị elu: Will ga - amụta iji onye na - achị achị ma gbakọọ ebe na pensụl. Will ga-agbakwunye foto ma mara akụkọ ihe mere eme nke onyonyo.
Nkebi nke ọ bụla na usoro nke omume na ajụjụ ị ga-eji mata echiche ndị a hụrụ, yana akwụkwọ PDF nbudata
Jikwaa Google Earth dị ka ọkachamara.
Mepụta akara akara, ahịrị na polygons.
Bubata ozi sitere na sistemụ ozi ndị ọzọ gbasara mpaghara.
Mbupụ ihe osise dị elu.
Mepụta na mbupụ njegharị.
Na-ekpuchi ihe onyoonyo ma lelee akuko onyonyo
Ga-achọ ngwanrọ Google Earth Pro. Anyị ga-akuzi usoro a.
Basickpụrụ dị ala na kọmpụta na iji òké ga-ezu.
Onye obula choro ima ebe ohuru na mbara uwa.
Ndi nkuzi choro imezu uzo izi ihe ohuru. Kụziri ihe gbasara ala dị ka ihe doro anya, mana ị nwekwara ike ịme mmemme na klaasị maka ihe atụ, ịmụ ụlọ Egypt.
Ọkachamara sitere na mpaghara ọ bụla chọrọ ị mepụta ozi ọdịdị ala na enweghị mgbagwoju anya nke iji Usoro Ozi Geographic.
Igwe ihe eji enyere aka Usoro GIS
Previous Post«Previous #GIS - Usoro nyocha na ide mmiri - iji HEC-RAS na ArcGIS
Next Post #LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 1Next »